Ogaden News Agency (ONA) – Gudomiyayasha Jaliyadaha Somalida Ogadenya Iyo Xubnaha Golaha dhexe ee Qarada Waqoyiga America oo Shir Khadka Talefonka ah isugu Yimid
Gudomiyayasha Jaliyadaha Somalida Ogadenya Iyo Xubnaha Golaha dhexe ee Qarada Waqoyiga America oo Shir Khadka Talefonka ah isugu Yimid
Posted by ONA Admin	/ April 28, 2014
Q/W America- Maanta oo Axad ah, 27 April 14, waxaa khadka talephonka shir muhiim ah isugu yimid Gudomiyayasha Jaliyada Somalida Ogadenya iyo xubnaha golaha dhexe ee JWXO ee ku nool qaradani waqoyiga America.
Shirkan oo ah shir Bila ah oo bishiiba ay mar isugu yimadan howlwadeenada halganka Ogadenya ee ka howl gala qaradani Waqoyiga America ayaa maanta waxay kaga hadleen ajendayaal mug waa wayn oo dana muhiim ah u leh tayaynta iyo sare u qadida halganka Ogadenya loogu jiro xoraynta.
Shirkan oo socday mudo sacado ah ayaa is waraysi kadib waxaa laguda galay falaqaynta ajendayasha shirka uyalay si cilmiyaysana looga hadlay. Shirkan ayaa waxaa lagu go,amiyay arima muhiim ah oo ay ka mid,ahayen:-
1- In gudomiya yasha iyo xubnaha golaha dhexe ee JWXO ay kormeer kuwada maraan dhamaanba Jaliyada Somalida Ogadenya ee ku nool qaradani waqoyiga America si ay u ogadaan una qiimeyan howlaha Jaliyada logana tayeyo dhinacyady ubahanyihin.
2- Waxaa la magacabay gudi soo qaban qabisa Shir ay qaradu isugu timato.
3- xojinta wax tartka hiil iyo hooba ee halganka Ogadenyea.
Waxaa kale oo shirka lagu goamiyay qodobo kale oo muhim ahaa oo aan loogu talagalin in wakhtigan saxafada lagu soo bandhigo.
Hadaba shirka, oo san horayba u shegay mudo sacado ah ayaa waxaa uu ku soo gabagaboobay jawi aad u wanagsan.